नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : संबिधान, शान्ति, स्थिरता र बिकास यो युगमा देख्न गार्हो ! अब फेरि आन्दोलन ! आन्दोलनका कार्यक्रममा आमहड्तालदेखि संविधान जलाउनेसम्म !
संबिधान, शान्ति, स्थिरता र बिकास यो युगमा देख्न गार्हो ! अब फेरि आन्दोलन ! आन्दोलनका कार्यक्रममा आमहड्तालदेखि संविधान जलाउनेसम्म !
नेकपा–माओवादीले एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चाको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै छुट्टै् र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । राजधानीमा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फ् आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । आन्दोलनका कार्यक्रममा आमहड्तालदेखि संविधान जलाउनेसम्मका छन् । आफूले अघि सारेका ६ बुँदे प्रस्तावमा सहमति जनाए एकीकृत माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न सक्ने नेकपा–माओवादीले जनाएको छ ।